Ngwaọrụ Mmepụta Wireframe inwe mmekọrịta | Martech Zone
Maka afọ gara aga, anọ m na-agba mbọ ịchọta ihe ntanetị nke dị mfe, gbakwunye ngwaọrụ, yana nwee mmekọrịta mmekọrịta nke na-eickedomi otu ihe HTML na ihe si arụ ọrụ. Nchọgharị m mechara kwụsị Hotgloo.
Site na saịtị ha: HotGloo bụ ngwa ịntanetị bara ọgaranya nke ezubere iji wuo waya ntanetị arụ ọrụ maka weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ weebụ. Mepụta na ịkekọrịta mmekọrịta zuru oke na ntanetị. Gị na ndị ọrụ ibe rụkọta ọrụ ma soro ndị ahịa kerịta ihe mmepụta ahụ. HotGloo bụ egwuregwu zuru oke maka onye ọ bụla na-arụ ọrụ na ọrụ weebụ.
Ihe kachasị amasị m banyere Hotgloo bụ ikike ịgbakwunye ihe ndị na-arụ ọrụ dịka nkwupụta ihu, nkwekọrịta, map na eserese. Ihe obula i dobere na peeji a bu ezigbo mmekorita… i nwere ike inye onye ahia gi ihe na-arụ ọrụ, waya waya mmekọrịta kama nanị ka na-ese foto na-enye enweghị mmekọrịta. N’izu gara aga a, aga m ezigara ndị na-elekọta ụlọ ọrụ ihe ntanetị, yana Hotgloo, o were m ihe na-erughị awa 2 iji dozie saịtị niile na ọtụtụ peeji na mmekọrịta.
Gị ahịa ọbụna nwere ohere ịdọrọ ndetu n'elu prototype na ikwu ma ọ bụ na-ahapụ ajụjụ nile. Ọ bụrụ na m nwere otu ọchịchọ maka Hotgloo, ọ ga-abụ ịrịọ maka obere peeji. Ka ọ dị ugbu a, ibe niile bi na otu ndepụta na sidebar. Inwe uzo ma obu ikike itinye peeji n'okpuru peeji ga adi nma ichikota saịtị ma obu oru ngocha.
Ricnye ọnụahịa dị oke ọnụ, site na otu onye ọrụ na $ 7 kwa ọnwa na ụdị nke Enterprise na ndị ọrụ na-akparaghị ókè maka $ 48 kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ, ịnwere ike ịkwụ $ 5 kwa ọnwa maka ikike otu!
Tags: mmekotalayout ngwaọrụnhazi peejinhazi ihu weebụwayawireframe ngwaọrụwayaframing
Aug 14, 2011 na 12:47 PM
Daalụ maka nyocha Douglas. Lezienụ anya maka mbipute 3.0, nke a na-ewepụta Aug 15.
Aug 14, 2011 na 3:24 PM
Na-ele anya ya, Wolf!